Fifampifanonganonganana | mandimby maharo
Fifampifanonganonganana	Posted on 19 June 2013 by Mandimby Maharo	Kandida 19 no nanao sonia ilay fanambarana fa tsy manaiky ny fampikatsoana ny fifidianana sy ny fandikan-dalana ataon’ny Fat. Manohitra ny fizirizirin’ireo kandida telo mampalailay fonosana ny fivondronambe iraisampirenena koa izy ireo, ka miantso ny hery velona rehetra sy ny vahoaka andray andraikitra. Firotsahana an-dalambe sy fanonganana ny fitondran’ny Fat Andry Rajoelina no hetsika kasain’izy ireo ho atao amin’izany.
Misy amin’ireo Kandida ireo no nandray anjara tamin’ny fanongam-panjakana. Maro koa ireo efa nandray anjara tamin’ny fitondrana notarihin;ny mpanongam-panjakana izay heveriny ho ahongana indray ato ato. Ao koa ireo tafiditra amin’ilay lisitry ny 119 voasazy. Misy koa ireo izay mbola tsy nisedra fifidianana hatrizay mihintsy ka manantena amin’izao hetsika ho tanterahiny izao fa hahazo fahefana tsy mandalo ny fifidianana toa ilay ho ahongany. Ao koa ireo kandida maiva-kitsaka ka na hirosoana aza ny fifidianana dia inona fa tsy hahazo na dia 1% akory ka manantena kitapo latsaka amin’izao fikasana hanongam-pitondrana izao mba hahazo fanjakana.
Ny fanontanina mipetraka dia hoe: matoa ireo nirotsaka ho filoha dia samy matikambo fa mahay mitarika, koa iza amin’izy19 ary no tena hitarika ny hetsika atao ka ho eken’ny 18 ambiny fa lohan’ny hetsika? Inona manko fa samy tsy hanaiky ho takona na dia ny iray aza. Sady raha toa ka hahomby tokoa ilay hetsika dia tombony lehibe ho an’izay nitarika izany any amin’ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana filoha izany fahombiazana izany. Fifidianana izay mety tsy hisy satria io mpitarika io koa dia tsy hanaiky satria ‘ Namono ny voay ka tsy maintsy hiravaka ny vanginy’.Tantara mitohy ny amin’ity…
Tags: Alain TEHINDRAZANARIVELO, Albert Camille VITAL, Andry Rajoelina, Bejamin Andriamparany RADAVIDSON, Faharo RATSIMBALSON, fifidianana, Fleury LEZAVA, Hajo ANDRIANAINARIVELO, Jean Eugene VONINAHITSY, Jean LAHINIRIKO, Joseph Martin RANDRIAMAMPIONINA, Julien RAZAFIMANAZATO, Mada2013, Ny Rado RAFALIMANANA, Patrick RAJAONARY, Pierrot RAJAONARIVELO, Roger KOLO, Roindefo Zafitsimivalo MONJA, Roland RATSIRAKA, Saraha GEORGET RABEHARISOA, Tabera RANDRIAMANANTSOA, William NOELSONCategories: Uncategorized